Nyere Onye nke Gị Na-arịa Ọrịa Aka
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Nepali Norwegian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Otu nwaanyị aha ya bụ Maribel kwuru na mgbe papa ya chọrọ isi n’ụlọ ọgwụ lawa, ha gakwuuru dọkịta ka ọ gwa ha ihe a chọpụtara n’ọbara papa ha. Dọkịta ahụ gwara ha na o nweghị ọrịa a chọpụtara. Ma, o mechara leruo anya n’ebe e dere ihe a chọpụtara ma hụ na ọbara papa ha adịchaghị otú o kwesịrị ịdị. Ọ rịọrọ ha mgbaghara ma kpọọ dọkịta ga-eleba ya anya. Maribel kwuru na ahụ́ papa ya akatụwala mma nakwa na a garaghị achọpụta ihe ahụ ma a sị na ha ajụwaghị dọkịta ahụ.
Mmadụ ịna-aga ahụ dọkịta mgbe niile ma ọ bụkwanụ ịnọ n’ụlọ ọgwụ ọtụtụ ụbọchị adịghị mfe. Ma, ihe a Maribel kwuru n’elu gosiri na enyi mmadụ ma ọ bụ onye ikwu ya ịnọ ya nso mgbe ahụ́ na-adịghị ya bara ezigbo uru n’ihi na o nwere ike ịzọ ya. Olee otú ị ga-esi nyere onye nke gị ahụ́ na-adịghị aka?
Tupu unu agawa ịhụ dọkịta. Nyere onye ahụ aka dee ma otú ọrịa ahụ si eme ya ma ọgwụ ọ na-aṅụ. Deekwa ajụjụ unu ga-ajụ dọkịta. Ọ bụrụ na onye ọrịa ahụ bụ enyi gị, jụọ ya otú ọrịa ahụ si emebu ya. I nwekwara ike ịjụ ya ma ò nwere onye ezinụlọ ha rịatụrụla ụdị ọrịa ahụ. Echela na dọkịta kwesịrị ịma gbasara ihe ndị ahụ ma ọ bụkwanụ na ọ ga-ajụ unu ha.
Gee dọkịta ntị, jụọ ya ajụjụ ụfọdụ dị mkpa, deekwa ihe ụfọdụ ede
Mgbe unu na-ahụ dọkịta. Gị na onye ọrịa ahụ gee dọkịta ntị nke ọma ka unu ghọta ihe ọ na-ekwu. Jụọ ya ajụjụ ma o nwee ihe na-edochaghị gị anya, arụkwala ya ụka. Hapụkwa onye ahụ na-arịa ọrịa ka o jiri ọnụ ya jụọ ya ihe ụfọdụ. Gee ntị nke ọma, deekwa ihe ụfọdụ n’akwụkwọ. Jụọ dọkịta ahụ ka ọ gwa unu ụzọ ndị o nwere ike isi gwọọ ọrịa ahụ. Mgbe ụfọdụ, i nwere ike ịgwa onye ọrịa ahụ ka unu nụ ihe dọkịta ọzọ nwere ike ikwu gbasara ọrịa ahụ.
Lebanụ ihe dọkịta kwuru anya nakwa otú o kwuru ọ ga-esi ṅụọ ọgwụ ya
Mgbe unu hụchara dọkịta lọta. Gị na onye ọrịa ahụ kwurịta ihe unu jetere na nke dọkịta. Nyere ya aka inweta ọgwụ ndị a gwara ya ṅụwa. Hụkwa na ọ na-aṅụ ha otú e si gwa ya. Egbukwala oge ịgwa dọkịta ma e nwee nke nyewere ya nsogbu. Gwakwa onye ọrịa ahụ ka ọ ghara ịna-echegbu onwe ya. Gbaakwa ya ume ka ọ ghara ileghara ihe ọ bụla dọkịta gwara ya ga-enyere ya aka anya, dị ka ịga hụ dọkịta mgbe ọ chọrọ ka ọ bịa. Kọkwaara onye ahụ ihe ọ bụla ọzọ ị ma gbasara ọrịa ya ahụ.
Mgbe Unu Nọ n’Ụlọ Ọgwụ
Hụ na e dejupụtara akwụkwọ ndị dị mkpa nke ọma
Anya ruo gị ala. Obi anaghị erucha onye ọrịa ala ma o rute n’ụlọ ọgwụ. Ma ọ bụrụ na ahụ́ eruo gị ala, i nwere ike ime ka ahụ́ ruo ma yanwa ma ndị ụlọ ọgwụ ala. Ọ ga-eme ka ha lebara ya anya nke ọma. Nyekwara onye ọrịa ahụ aka idejupụta akwụkwọ e ji anabata mmadụ n’ụlọ ọgwụ. Hapụkwa ya ka o jiri aka ya kpebie otú ọ chọrọ ka e si gwọọ ya. Ma, ọ bụrụ na ọrịa na-emesi ya ike nke na ọ gaghị ekwuli okwu, hụ na ndị ụlọ ọgwụ mere ihe o dere n’akwụkwọ gbasara otú e kwesịrị isi agwọ ya nakwa na ha mere ihe onye o dere n’akwụkwọ ga na-ekwuchitere ya ọnụ ya kwuru. *
Medaa obi gwa dọkịta ihe ị chọpụtara
Agbachila nkịtị. Gwa ndị ụlọ ọgwụ ihe ọ bụla ị chọrọ ịgwa ha. Ọ bụrụ na ị na-akwanyere ha ùgwù mgbe ị na-ekwu uche gị, ọ ga-eme ka ha lebara onye gị anya nke ọma. N’ọtụtụ ụlọ ọgwụ, ọ bụghị otu dọkịta na-agwọ onye ọrịa. Ọ ga-adị mma ma ị na-agwa dọkịta nke ọ bụla ihe ibe ya kwurula gbasara onye ọrịa ị na-elekọta. O nweekwa ihe ọhụrụ ị chọpụtara n’ahụ́ onye ahụ ị na-elekọta, mee ka ha mara.
Nyere onye nke gị aka n’egbochighị ndị ụlọ ọgwụ ịrụ ọrụ ha
Kwanyere ha ùgwù, na-ekelekwa ha. Ọrụ ndị ụlọ ọgwụ adịghị mfe. N’ihi ya, kpasoo ha àgwà otú ị ga-achọ ka a na-akpaso gị. (Matiu 7:12) Agwala ha okwu ka à ga-asị na ha amaghị ihe ha na-eme. Kama, na-agwa ha okwu otú ga-egosi na obi siri gị ike na ha ma ọrụ ha. Na-ajakwa ha mma maka mbọ ha na-agba. Ọ bụrụ na i mesoo ha otú a, ọ ga-eme ka ha mee ihe niile ha nwere ike ime iji gwọọ onye ahụ.
O nweghị onye na-anaghị arịa ọrịa. Ma ọ bụrụ na ị gbaa ezigbo mbọ, ị ga-enyeliri onye nke gị aka n’oge ọrịa ji ya aka.—Ilu 17:17.
^ para. 8 Ihe iwu otu obodo kwuru gbasara onye ọrịa ikpebi otú a ga-esi agwọ ya na-adị iche n’ihe iwu obodo ọzọ kwuru. Leruo akwụkwọ na-egosi otú onye ọrịa ahụ chọrọ ka e si gwọọ ya anya nke ọma ka i nwee ike ịmara ma ihe ndị e dere na ya ọ̀ dịkwa otú o kwesịrị ịdị.